ciid wanagsan ciid wanagsan berito waa maalintii ciidul fidriga dad badan waxay taagan yihiin banka arafa dadna waxay u dabaal degayan ciidaan fidriga si ay soonkoodii maalmihii ay ku jirnay bishii barakeysneyd ee ramadan anigoo ah qoraaga webkan iyo dhamaan shaqaalaha waxay nii leeyihiin ciid wanagsan ciidan ciideeda si nawad iyo farxad ku gaara aduunyada meel walba aad ka joogtan umadeyna soomaliyeyd ee 20 kaan sano ee ku haajirteyn wadamada kala duwan qaasatan afrika iyo aasia iyo oroba anigoo ah abubakar mohamed hasan oona ah qoraa da,yar oo ku sugan jaziirada maalta marka hore waxa salaamaha ciidan u dirayan saaxiibkeyga qaaliga ah oona mar aan isla wada shaqeyno cabdi casiis maxamed sheeq ahmed mr qalbijaceyl iyo asxaabta webka nololcusub.tk waxey kala yihiin
cabdala aadan maxamed
cabdicasiis aadan maxamed
yusuf cali ciise
c/ladiif c/laahi cabdi
aadan salaad cali
aadan sheeq beri
maxamuud maxamed ibraahim iyo dhamaan asxaabteyda oo kala ah
c/risaaq maxamed nuur
c/dulaahi sheeq xasan
maryam maxamed hsan
fadumo maxamed hasan
cumar maxamed hsan
ismaacil maxamed hasan
fahad maxamed hasan
maxamed abubakar mrqurbaani
hodan abubakar mr qurbaani
iyo dhamaan intii maqalkeyga iyo muuqayga taqaano waa anigoo ah mr qurbaani aan intaan qoraal ahan kuso koobi karin waxana idin leeyahay sanadkaan sandkiisa farxad aan kuwada ciidno markaan kuso dhawaada
guurka 5 faa,iidood an ka helno inkastoo lamaane badan ay ka dhamaatay baby I love you kaliya looma baahna wax qabad aya loo baahan yahay waayo waa dumar waxa aad xiriir la leedahay hadi aad dhahdo dumar aya go,aan ka suga go,aankii guurka waliga waxa ku jiraneysa ciil adun iyo naftaada aad beyn usheegeyso waayo dumar go,aankooda waxa lagu sheegay in ay luwada uuso dhaafinba sidee wax yeeleysa adiga aya kula hadlaa sida aan sameyn ku dhaho hadii aad sameyso jaceylkaaga wuxuu noqonaya kii miro dhala ,,,,,,,,,,
markaana kuso dhowow guurka maxa laga faa,iida wa 5 aya hada kaso qaatay ka faa,iideyso walal anigo markaleto ku dhahaayo ciid wanagsan waamaalintii aan in badan sugeynay anago 29 cisho afka noo xirnaa beritana aan afka fureyno koleytaba waan jeclaan lahay in aan asxaab badan aan qadka ku bartay in aan berito xalwo ka doonan lahay laakin eesan iisuurta galineynin waxaana leeyahay qadka aa liiso dhigo intii i jecel .
Guurku waxa uu leeyahay shan faa�iido oo kala ah:.
1- Ubad kaa hara:- Faa�iidooyinka guurka tan ugu horreysaa waa sidii lagu heli halaa ubad, si aanay tafiirta dadku u dabar go�in. Ubad dhalistu waa inay yeelataa afar ulajeeddo oo kala ha:
3- Qalbigoo kuu dega iyo laabtoo kuu qabowda:- Shaqo tay naftu u jeceshahay haddaan loo helin waqti nasasho, waa lagu daalayaa dabeetana la�iska deynayaa. Haddaba maxaad ka oran lahayd hadday shaqadaasi tahay taqwada Eebbe ooy iyada iyo naftuba isdiidayaan!. Saacadaha uu ninku ku hawlan yahay cibaadada Alle iyo camalka adduunyo, waxaa habboon inuu dhexgashado waqti uu xaaskiisa kula baashaalo, si qalbigu ugu dego, laabtu ugu qabowdo firfircoonaanna uga qaado.
4- Hawshii guriga oo hoggaankeedii kaa wareego:- Ninka oo ka xorooba maamulka guriga sida hagaajintiisa, xaaqistiisa, goglistiisa, cunto karinta iyo diyaarinta, alaab dhaqista, suuq kasoo adeegga, iwm., waxay siisaa waqti dheeraad ah oo uu ku shaqaysto, wax ku barto, Eebbena ku caabudo. Rasuulkeenna suubban (Sallallaahu calayhi wasallam) waxa uu xadiis uu soo saaray Tirmidi ku leeyahay: (Midkiin ha yeesho qalbi Eebbe ku mahadin og, carrab Eebbe xusid badan iyo haweeney mu�minad suubban ahoo Aakhiradiisa ku kaalmeysa). Haddaba dumarka looma guursado oo qura in adduunyada lagu raaxaysto, carruurna laga daadiyo, balse yoolka ugu muhiimsani waxa weeye inay kuu abuuraan waqti iyo jawi aad Eebbe ku caabuddid.
5- Nafta ood kula dagaallantid daryeelka qoyska:- Nafta ood ku jara-bartid qaadista mas�uuliyadda reerka, daryeelkiisa, gudashada waajibka kaa saaran xaaskaaga, dabeecaddeeda ood ugu samirtid, dhib wixii kaaga yimaada ood u dulqaadatid, hanuuninteeda ood u hawlgashid, dadaal aad u gashid sidaad marasho iyo masruuf xalaal ah ugu keeni lahayd, carruurta ood ku tarbiyeysid waddada toosan, iwm.Waxaas oo dhami waxay kamid yihiin faa�iidooyinka guurka, tiiyoo weliba ajar iyo xasanaad Eebbe kaa siinayo. Nabigeennu (Sallallaahu calayhi wasallam) waxa uu xadiis ku leeyahay: (War hooya gebigiin waxaad tihiin Qawsaarro, qawsaar walibana waxa uu mas�uul ka yahay wixii la raaciyey). Waxaa la sheegay in raggii hore ee suusuubbanaa mid kamid ahi uu niman walaalihii ah ooy jihaad ku wada jireen weydiiyey: (Ma garanaysaan shaqada aynu hadda hayno mid inooga ajar badan?). Markaas bay yiraahdeen: (Ma garanayno). Suu yiri: (Anaa garanaya). Markey weydiiyeenna waxa uu ugu jawaabay: (Nin sabool ahoo ciyaal leh, ha yeeshee aan cidna wax weydiisan, oo intuu cawa-barkii toosay oo reerka indha-indheeyey arkay carruurtiisii oo hurudda cawradooduna bannaan tahay, dabeetana ku huwiyey go�ii uu keligii dhar ka lahaa, kaas baa naga camal wanaagsan).
Arrimaha loo baahan yahay in ahmiyad la siiyo kolka la dooranayo lammaanaha nolosha waxa ugu horreeya diinta iyo dabeecadda sidaynu horeba usoo sheegnay, waxase aan la inkiri karin inay jiraan umuuro kale oo iyaga laftoodu ahmiyaddooda leh, waxaana kamid ah farqiga u dhexeeya da�da ninka iyo da�da inanta uu guurkeeda doonayo
Abuubakar (RC) iyo Cumar (RC) ayaa mid waliba goonidiisa usoo doontay Faadumo binti Rasuul (Sallallaahu calayhi wasallam), markaas buu Rasuulku (Sallallaahu calayhi wasallam) mid waliba goonidiisa ugu sheegay inay gabadhu yartahay. Ha yeeshee kolkuu Cali (RC) soo doontay, waa uu siiyay, waxanay culimada qaar taa ku micneeyeen in Rasuulku (Sallallaahu calayhi wasallam) doonayey inuu gabadhiisa u guuriyo nin ay isku da� dhowyihiin, waxana markaasi Faadumo (RC) ay jirtay shan iyo toban sano iyo shan bilood, halka uu Cali (RC) ka jiray koow iyo labaatan sano iyo afar bilood.
Waxaa laga yaabaa inuu maskaxdaada ku soo dhoco guurkii Rasuulkeenna (Sallallaahu calayhi wasallam) iyo Sayidah Caa�ishah (RC) oo iyadu aad uga da� yarayd Rasuulka (Sallallaahu calayhi wasallam), ha yeeshee qoraaga kitaabka (Tuxfatul-Caruus) Maxamuud Al-Istambuuli waxa uu ku doodayaa in umuurtaasi aanay ahayn mid lagu dayan karo sababahaan soo socda awgood:
– Dadnimada Rasuulka (Sallallaahu calayhi wasallam) oo dadnimo qof lala simaahi jirin, taasi oo keentay inay Caa�ishah farxad kula noolayd, isagana ka door bidday nin kasta oo dhallinyaro ahaa oo soo doontay.
– Caa�ishah oo ahayd qof aad u diin badan, marnabana aan cabsi looga qabin inay gef ka geysato guurkaasi.
Gabar baa gabar weydiisay: Naa rag kee baad ugu jeceshahay?. Markaas bay tiri: �Waxaan ugu jeclahay ger caddaale, guunyo badane, gaajo gooye, kuu garaabe, ku garab taagne, gef ka dheere, garoor ma daadshe, gaawe carafle, gaari farasle, gaarka haaye, deris gargaare,,,, ee adiguna�. Markaas bay ugu jawaabtay: �Anna Gar madoobe, geed walwaale, garruun weyne, gujo kulule, gunta ku geeye, kuna gufeeye, gidaarra jeexe, gurxan badane, gebagebeeye, gacan sarreeye, gam�i waaye,,,, kaas baan u jeclahay ee aniga iyo adiga teennee caqli badan?�
Sida ninkuba u jecelyahay inuu guursado gabar da� yar, qurux badan, caqli badan, dhawrsan, asagana jecel oo dhaqaalaysa, ayay gabadhuna u jeceshahay in loo guuriyo wiil da� yar ama aan wax badan ka durugsanayn, qurux badan, caqli iyo ragannimo badan, dhawrsan oo iyada uun ku kooban, deeqsina ah.
Waxaa la yiri: Nin gaaban oo fool xun baa wuxuu qabay gabar qurux badan. Maalin buu usoo galay ayadoo si fiican isu qurxisay. Markaas buu isha la raacay awoodina waayay inuu ka jeesto. Markay aragtay siduu u eegayo bay tiri: �Maxaa kugu dhacay?�. �Wallaahi aad baad u qurxoonaatay�. Markaas bay tiri: �Ku bishaareyso inaan aniga iyo adiguba Janno geleyno�. Suu weydiiyey: �Oo xageed ka ogaatay?�. �Anoo kalaa lagu siiyey markaas baad shukriday, adoo kalena waa la�i siiyey markaas baan sabray, qofka shukriya iyo ka sabraana waa ehlu janno� bay hadal ugusoo jartay.
Waxaa la yiri: Nin baa asagoo faras fuushan waxaa kahor timid naag uusan quruxdeeda ayadoo kale hore u arag. Markaas buu ku yiri: �Hadduu nin ku qabo Eebbe hakuu barakeeyo, haddii kalese ii sheeg�. Markaas bay ku tiri: �Maad iska kay dhaaftid wax aanad jeclayn baa igu yaalle�. �Maxaa kugu yaal?�. �Madaxayga cirraa ku taal�. Intaa markuu maqlay buu faraskii saynta u rogay si uu u dhaqaaqo, waase ay joojisay, oo intay timeheedii hagoogta ka qaadday tustay, mise waaba timo madowgooda wax lagu mitaalo aan la arag. Waxayna ku tiri: �Wallaahi inaanan weli labaatan jir gaarin, ha yeeshee waxa madaxaaga iiga muuqatay cirro, waxana aan rabay inaan ku tuso in annaguba aan idinku nacayno waxa aad nagu nacaysaan�.
Jaceyl rafaad galey dacwaan ku qaba ku deyn maayo ada idilee